Shona homepage - Voice of America
Monday, May 20, 2013 Local time: 11:54
Nhau dzeShona 1700 Studio 7 for Zimbabwe Indaba VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti bato ravo rine basa rakakura k rekurwisa nehuwori pamwe nekusawanikwa kwemabasa kana richinge rakunda musarudzo. Zanu-PF Yoyedza Kugadzirisa Bopoto kuMasvingo Chikwata cheZanu-PF chiri kutungamirwa nasachigaro webato iri, VaSimon Khaya Moyo, chapinda muMasvingo umo chiri kuyedza kupedza bopoto riri mubato iri apo ratarisana nesarudzo dzenyika. Vakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDC Kunetsana pakati peMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai nevamwe vakuru vakuru muchipurisa nekumauto kuri kuenderera mberi zvinonzi nevamwe zvokonzerwa nenyaya yekuti nyika yatarisana nesarudzo. Vana Muzvinabhizinesi Vopangana Mazano muAmerica Vana muzvinabhizinesi pamwe nevamiriri vemakambani vari kusangana muMaryland umo muchaitirwa neChishanu musangano wekutsvaga nzira dzekuti vemabhizinesi vaite muonera pamwe. previous 1234 next VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo Zanu-PF Yoyedza Kugadzirisa Bopoto kuMasvingo Vakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDC Vana Muzvinabhizinesi Vopangana Mazano muAmerica Studio 7 Studio 7 Shona_STUDIO7
DZIMWE NHAU VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti bato ravo rine basa rakakura k rekurwisa nehuwori pamwe nekusawanikwa kwemabasa kana richinge rakunda musarudzo. Onai zvimwe Vana Muzvinabhizinesi Vopangana Mazano muAmerica Vana muzvinabhizinesi pamwe nevamiriri vemakambani vari kusangana muMaryland umo muchaitirwa neChishanu musangano wekutsvaga nzira dzekuti vemabhizinesi vaite muonera pamwe. Onai zvimwe Vakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDC Kunetsana pakati peMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai nevamwe vakuru vakuru muchipurisa nekumauto kuri kuenderera mberi zvinonzi nevamwe zvokonzerwa nenyaya yekuti nyika yatarisana nesarudzo. Onai zvimwe Zanu-PF Yoyedza Kugadzirisa Bopoto kuMasvingo Chikwata cheZanu-PF chiri kutungamirwa nasachigaro webato iri, VaSimon Khaya Moyo, chapinda muMasvingo umo chiri kuyedza kupedza bopoto riri mubato iri apo ratarisana nesarudzo dzenyika. Onai zvimwe Hurumende Yoyedza Kurerutsa Mitemo yeSarudzo Makurukota ehurumende matatu nevesangano reZimbabwe Election Commission vakapinda mumusangano neChina wekuzeyeya nyaya yekuti vaise mutemo kana kuti statutory instrument unotaura nezvekurerutsira vanhu kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Onai zvimwe Sangano revanhu Vakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDC Hurumende Yoyedza Kurerutsa Mitemo yeSarudzo South Africa Inoti Zimbabwe Ngaivandudze Zvinhu Isati Yaita Sarudzo Dzidzo VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo VaMugabe Vanoparura Chirongwa Chekuwanira Vanhu Chikafu Hurumende Yotadza Kubatsira Zvikoro Zvepamusoro Mari nehupfumi VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo Vana Muzvinabhizinesi Vopangana Mazano muAmerica Vakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDC Chikafu nekurima VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo Zanu-PF Yoyedza Kugadzirisa Bopoto kuMasvingo VaMugabe Vanoparura Chirongwa Chekuwanira Vanhu Chikafu Kodzero dzevanhu VaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda Musarudzo Vana Muzvinabhizinesi Vopangana Mazano muAmerica Zanu-PF Yoyedza Kugadzirisa Bopoto kuMasvingo Mitambo Vatambi veHighlanders Voramwa Basa Vachiti Vanoda Mari Dzavo Zifa Inodoma Achatungamira Vatsigiri veNhabvu Facebook
Most PopularMost ViewedVaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda MusarudzoZanu-PF Yorerutsa Mitemo Yayo yeSarudzoMapato Owirirana Kuwedzerwa kweNguva yeKunyoreswa kweVavhotiSouth Africa Inoti Zimbabwe Ngaivandudze Zvinhu Isati Yaita SarudzoVakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDC RSSMail SubscriptionMobile